Ele Teknụzụ Sheen sonyere na ngosi nke Dubai
site ha na 20-01-22
Site na igwefoto ya mbugharị, ụgwọ ndị na-akwụ ụgwọ, ihe igwefoto PTZ dị iche iche, igwefoto PTZ dị ogologo, domes na ngwaahịa ndị ọzọ, View Sheen Technology sonyere na ngosi ahụ emere na Dubai. Lelee Sheen nwere ngwa ahia zuru oke nke igwe onyonyo mbughari, nke na-ekpuchi network na dijital lvds cam ...
Lelee Teknụzụ Sheen sonyere na CPSE 2019 na Shenzhen
site ha na 19-10-23
Lelee Teknụzụ Sheen sonyere na CPSE 2019 na Shenzhen. Ele Sheen Technology weputara usoro igwe onyonyo mbugharị nke ogologo dị ka igwefoto mbugharị 860mm / 920mm / 1200mm, nke dọtara ọtụtụ ndị ọbịa. Igwefoto ahụ dọtara ọtụtụ ndị ahịa na-agba izu na nkwukọrịta. Lelee Sheen Tech ...
Lelee Sheen Technology tinyere aka na CPSE 2018 na Beijing
Lelee Sheen Technology tinyere aka na CPSE 2018 na Beijing. Lelee teknụzụ Sheen gosipụtara ọtụtụ ngwaahịa ọhụụ, gụnyere 3.5x 4K ultra HD mbugharị igwefoto mbugharị, 90x 2MP ultra long range zoom block camera, na UAV sọrọ sensor gimbal igwefoto. Igwefoto ngọngọ 90x bụ ngwaahịa ọhụụ. M ...
Ele Sheen Technology ka a kpọọ ịbịa nzukọ ọmụmụ ihe UAV nke emere na Tianjin
site ha na 17-10-09
Ele Sheen Technology ka a kpọọ ịbịa nzukọ ọmụmụ ihe UAV nke emere na Tianjin. Ele Sheen Teknụzụ azụlitela igwefoto igwefoto maka mmiri ozuzo. Igwefoto nwere HDMI na ntanetị ntanetị ma nwee ike dakọtara na usoro nnyefe vidiyo dị iche iche. Igwefoto mbugharị drone nwere ike ịkwado sna ...